व्यावसायिक सपना देख्नेहरूको आइडिया बैंक
कोहीको नेपालमै मोती उत्पान गर्ने सपना । कोहीको घिरौँलाको झालबाट पैसा कमाउने सोच । कोहीको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ आविष्कार गर्ने हुटहुटी ।
बालकुमारीस्थिति ‘आइडिया स्टुडियो’मा पुग्दा आइडियटर आ–आफ्नो आइडियाबारे भलाकुसारीमा व्यस्त थिए ।
झट्ट सुन्दा आइडिया स्टुडियो भन्नेबित्तिकै धेरैको दिमागमा क्यामेरा, लाइट, एक्सन, कट यस्तैयस्तै घुम्छ ।
तर, आइडिया स्टुडियोको ढोका खोल्ने बित्तिकै अघिसम्म मस्तिष्कमा घुमेका चित्र अलप हुन्छ । केवल देखिन्छ सपनाका चाङ बोकेर दौडिरहेका मानिसहरू ।
भर्खर जुँगाका रेखी बस्दै गरेका युवादेखि सेतै कपाल फुलेका ज्येष्ठ नागरिकसम्मको आइडियाले भरिएको छ आइडिया स्टुडियो ।
आइडियटर भन्छन्, ‘यो त आइडियाको बैंक हो नि ! पैसा राख्ने मात्र बैंक हुन्छ र ?’
देश विदेशबाट आएका आइडियालाई आइडिया स्टुडियोले उद्यमसम्म जोड्दै आएको छ । त्यसैले त आइडियटरले ‘आइडिया बैंक’को उपनाम दिएका छन् ।
आइडियटरको आइडियालाई व्यावासयिक बाटो देखाइरहेका छन् डा. छिरिङ लामा र रूपेश श्रेष्ठको टिमले ।
पाँच वर्ष बित्यो लामा र श्रेष्ठको टिमले व्यावसायिक सोचलाई उद्यमको यात्रामा डोहोर्‍याउन थालेको । यो अवधिमा एक सयभन्दा बढी सोचले उद्यमको बाटो समाइसकेका छन् ।
‘नेपालमा के छैन ? पाइला-पाइलामा पैसा र भविष्य छ । घिरौँलाको सुकेको झालदेखि मोतीका दानासम्मको व्यवयाय गर्न सकिन्छ । तपाईं घिरौँलाको झाललाई आगो लगाउने कि त्यसमा आफ्नो सिर्जना भर्ने ?’, रूपेश प्रश्न गर्छन् ।
सिजन पाँचसम्म आइपुग्दा नयाँ सोच लिएर आउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।
‘१७ वर्षको चञ्चले उमेरदेखि ६७ वर्षसम्मका आइडियटर आउनु हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ जात, उमेर, वर्ग केही पनि छैन । सबैमा नवीनतम् उद्यम गर्ने हुटहुटी छ ।’
पाँचौ सिजनमा के हुँदैछ ?
यो वर्ष ७७ वटै जिल्लाबाट आएकालाई उद्यमको बाटोमा लैजाने योजना छ । एक सय प्रतिस्पर्धीबाट छानिएर आएको ३५ जनाले हाल व्यावसायिक तालिम लिइरहेका छन् । व्यवसाय कसरी संचालन गर्ने ? उत्पादन, सेवाग्राही, लगानीदेखि मूल्य कसरी निर्धारण गर्नेसम्मका ज्ञान आइडियटरलाई दिइँदैछ ।
सोचलाई कसरी व्यावसायिक आधार बनाउने भनेर बुट क्याम्प सञ्चालन गरिएको छ ।
‘बुट क्याम्प उद्यमशीलताको सीप सिकाउने वर्कसप हो । ७७ वटै जिल्लाबाट छानिएर आएका व्यावसायिक सोचलाई हुर्कनका लागि चाहिने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भनेर सिकाउँछौँ’, रूपेश भन्छन् ।
प्रशिक्षणपछि आइडियटरले सोचलाई उद्यमसम्म कसरी पहुँच बनाउने भन्ने योजना निणार्यक मण्डललाई सुनाउनेछन् । पाँच वर्षको अवधिमा आलोकाँचो सोच बोकेर आएका आइडियटरले व्यावसायिक रूप दिएको रूपेश बताउँछन् ।
‘पहिले र अहिलेमा व्यावसायिक सोचमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखिएको छ । पहिले सोच मात्रै हुन्थ्यो । अहिले व्यवसाय चलाइरहेका, अनुसन्धान गरेर योजना बनाएका र मौलिक उद्यमलाई पनि विश्व अर्थबजारमा लैजान सक्ने आइडिएटर आएका छन्’, उनी भन्छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २४, २०७७, १९:३७:४४